Aiza No Misy Fety? Miketrika Ny Ho an’izany ireo Trinidadiana Mpamorona Fampiasa! · Global Voices teny Malagasy
Aiza No Misy Fety? Miketrika Ny Ho an'izany ireo Trinidadiana Mpamorona Fampiasa!
Voadika ny 28 Aogositra 2016 7:21 GMT
Trinidadiana mpamokatra rindrambaiko, Andel Husbands sy Jonathan Agarrat ao New York. Sary nahazoana alàlana.
Avy aminà firenena iray fantatra betsaka amin'ny “fitiavany milanona” (manao fety) sy ny “fiarahana misotrosotro” no tonga ny fampiasa iray izay manondro ho an'ireo mpitia mifety ny làlana tokony halehany. Mpinamana hatry ny fahazazàny i Jonathan Agarrat sy Andel Husbands, samy 21 taona, namokatra ny fampiasa WhereDPump — ary avy eo nandefa azy io tamin'ny volana Jona lasa teo — nitondra ny filanonana sy ny teknolojia ho amin'ny haavo iray hafa.
Miaraka amin'ny fihazakazahan'ny fanatonan'ny Fetibe 2017, tsy ho sahirana amin'ny fitetezana ny tambajotra sosialy na hiantehitra amin'ny resaka ifampitàna intsony ireo mpankafy fety ao Trinidad sy Tobago hikaroka hetsika. Manome vintana ho an'ìreo mpikarakara lanonana ilay fampiasa mba hametraka anaty lisitra ny hetsika ataony, amin'ny fanangonana ho anaty toerana tokana ireo habaka natao ho an'ireo klioban'ny tia mandihy.
Nitafa tamin'ny mpamorona ny WhereDPump ny Global Voices, sady namantatra misimisy kokoa momba ilay tolotra vaovao.
Ny pejy fandraisana ao amin'ilay fampiasa, anehoana ireo hetsika samihafa.
Global Voices (GV): Inona no nanosika anareo hamorona ilay fampiasa? Inona no filàna heverinareo fa hotanterahan'izy io?
Andel Husbands (AH) sy Jonathan Agarrat (JA): Ny fitiavantsika milanona! Toa hafahafa ny fahitantsika azy hoe maro ireo fandraharahàna aty Trinidad no mbola ilay fomba ataon-tànana sy ambony taratasy hatrany no entina manao zavatra. Nihevitra izahay fa nitaky ezaka be loatra ny hahitàna izay ataon'ny klioba tsirairay isan-kalina, iza no anaty lisitra, ohatrinona no aloa, misy zava-pisotro manokana ve any, ary iza no olona ho any? Miaraka amin'izany fisainana izany, nanapaka hevitra izahay ny hamaha ireny olana ireny amin'ny fampiasàna ny teknolojia.
GV: Hevitra tena vao noforonina tanteraka ve izy io sa efa misy fampiasa hafa eo amin'ny tsena, mitovitovy amin'ny anareo?
JA: Misy ny sahala, fa tsy mitovy izy rehetra. Aleo hazavaiko: Instagram, Tumblr, Twitter — samy mibilaogy daholo izy rehetra ireo mandritry ny andro, noho izany sahala ry zareo — saingy tsy mitovy? Sa tsy izany? Misy fampiasa hafa any: fa tsy azo antoka raha misy fampiasa miresaka fotsiny ny lanonana, nefa izay no ataonay.
Ny zavatra azoko antoka dia tsy misy fampiasa ahafahanao misoratra ho anaty klioba, mandefa hafatra ho an'ny kaomity mpikarakara mba hahazoana tapakila sy hahazo isa azo havadika ho tapakila fankasitrahana ahafahana mijery lanonana. Zava-baovao izany.
Ankoatry ny fisafidianana hetsika dia azonao atao ny mahita antsipirihany mikasika ilay izy — raha natolony — ary afaka misoratra ho isan'ny mpanatrika aza ianao, mivantana avy ao amin'io fàfana io!
GV: Inona no tamberina hita hatramin'ny nandefasana ny WhereDPump tamin'ny iOS, ary nisy ve zavatra tsy nampoizinareo ?
AH: Nampitolagaga ny valiny. Tsy tena taitra loatra izahay raha ny marina, satria betsaka ny fotoana sy ezaka natontona ho amin'ny fiantohana ny hoe zavatra ho ilain'ny olona sy hahafinaritra azy ny mampiasa ilay izy no hajoronay. Ny tena nahagaga anefa, dia ny habetsahan'ireo olona mangataka ny hahazo azy io any amin'ireo toerana toa an'i New York sy Miami.
GV: Karazana fiantraikany na fahasamihafana tahaka ny ahoana no nantenainareo hatao miaraka amin'ity fampiasa ity?
AH & JA: Antenainay ny hametraka fenitra amin'ny famokarana rindrambaiko aty Trinidad ary ho aingam-panahy ho an'ireo hafa mpamokatra mba hanatanteraka ny heviny. Fanampin'izay, antenainay ny hamboly fahalinana any anatin'ireo mpianatra manerana ny firenena mba hitia ny siansan'ny solosaina ary tena hitondra marina an'i Trinidad handroso miaraka amin'ny teknolojia. Manana saina maranitra betsaka isika.
GV: Inona no manaraka ho an'ny WhereDPump? Misy hetsika mampientanentana ho avy ve ?
JA: Ny fanontaniana #1, ‘Inona no manaraka?’ Raha ny marina dia tsy hilaza velively izahay. Mbola betsaka no tokony hatao ary rehefa miova ny filàn'ireo mpampiasa dia hiova koa ilay fampiasa. Tsarovy fotsiny, ataovy manaraka ny zavamisy hatrany ny fampiasa anananao mba hisitrahanao izay zavamisy farany asongadinay.
GV: Ahoana no nidiranareo tamin'ny sehatry ny fandrafetana rindrambaiko ary nisy tranonkala toy ny Codecademy nanampy anareo hanana fahaizamanao ve?
AH & JA: Samy nampianatra ny tenany izahay roalahy. Ny zavatra mahatsikaiky dia izao, raha hanangana tranonkala iray tsotra kely, ny hany ilainao dia ny Word. Dia namaky fotsiny ny antontan-kevitra natao ho an'ny HTML izahay (fitaovana fametrahana ny pitsopitsny rehetra ho an'ny fametrahana tranonkala) ary dia nilalao tao anatin'ny Word tao. Tsy mbola nisy toy izao ankehitriny izao ny Codecademy tamin'ìizany. Natao ho toy ny vao mianatra mamindra ilay izy nony nahita azy io izahay taty aoriana. Ny iray amin'ny fomba tsara indrindra hianarana mandrafitra rindrambaiko dia ny mijery ny efa misy ary manandrana ny manakatra azy/na mikirakira azy. Tany amin'ny dingana voalohany indrindra nanombohanay nanoratra, dia betsaka fanaovana dika-petaka avy amin'ireo tranonkala efa nisy. Farany dia hitanay ny fomba fiasany.
GV: Karazana fiainana na fahaizamanao amin'ny fandraharahana toy inona no velombelomin'ny fanoratana rindrambaiko? Inona no mety ho tombony azon'ny tanora amin'ny fianarana ilay traikefa, ary mety mieritreritra ny hametraka fandaharanasa fampianara ny tanora eto Trinidad sy Tobago hanoratra rindrambaiko ve ianareo?
JA: Efa voalazan'i Steve Jobs tsara ilay izy, dia izy ihany no hotanisainay. ‘Tokony hianatra hanoratra rindrambaiko ho an'ny solosaina ny olona tsirairay eto amin'ity firenena ity satria manampy anao hanana ny fomba hisainana izy io.’ Tsy misy lalàna hafa tena tsara ametrahana azy. Amin'ny fahatanorànao dia toy ny tsy dia matahotra fahalavoana loatra ianao; mahaliana anao kokoa ny manandrana raha oharina amin'ny mianjera, araka izany, amin'ny ankapobeny ny fanoratana rindrambaiko ataon'ny tanora dia hitanay ho toerana iray ahitàna fisianà fahaiza-mamorona hahitàna ny tena vahaolana. Raha ny marina dia nanomboka nametraka fandaharanasa iray izahay ho fampianarana manoratra rindrambaiko ho an'ny Alma Mater mandritry ny fialantsasatra volana Jolay/Aogositra. Kanefa, noho ny fahasarotana sasantsasany, tsy vitanay ny nanatanteraka ilay fandaharanasa saingy mbola ho eo ary hanao izany izahay atsy ho atsy.
Ity ny mombamomba ny mpampiasa. Eto ry zareo no mahita ny isa azony sy mitantana ny lisitra ary ny tapakila raha toa ka mpivarotra na mpikambana amin'ny kaomity.
GV: Misy fiainana ve ao andamosin'ilay fampiasa? Inona no mety ho andrasan'ny mpanjifa amin'ny hoavy ?
AH: Ny mpanjifa no mitantana ilay fampiasa, ka raha mbola mampita ny olany na ny fomba fijeriny ry zareo, dia afaka miandrandra ny hahita vahaolana-.
JA: Izao koa, ho fanampin'izay rehetra efa anananay ao amin'ny toeram-piraketana ho an'ny WhereDPump, manana hevitra maro hafa izahay izay andrasanay ny hahatanteraka azy.
GV: Ahoana ny fiantraikan'ny maha-samy ato anatin'ity fandraharahana ity anareo tamin'ny maha-mpinamana anareo?
JA: Mpinamana nandritry ny 17 taona izahay, araka izany tsy dia nisy loatra ny niova. Samy nitondra betsaka ny avy aminy ho eo ambony latabatra izahay roalahy. Ny zavatra ilain'ny fitantanana orinasa iray manana olona roa afaka mandray fanapahankevitra dia ny fifanajàna mifamaly ary ny tsy fifaninanan'ny andaniny sy ny ankilany. Zavatra tsara ho anay ny tsy nitrangan'izany tranga izany, satria mifameno tsara ny fahaizamanaonay.
GV: Inona no fahalinana hafa anananareo amin'ny tontolon'ny asa? Mihevitra ny tenanareo ho mpamokatra fampiasa ve sa mpamorona zava-baobao ianareo?
AH & JA Mba samy te-ho any aloha any izahay mirahalahy — raha tsy tena eny aloha indrindra aza — amin'ny teknolojia aty Karaiba. Miomana ny hametraka orinasa iray ho an'ny teknolojia ao Trinidad sy Tobago izahay.
AH: Tiako ihany koa ny hanorina ny traikefako avy aminà fahaizamanao misimisy kokoa amin'ny sehatra samihafan'ny siansan'ny solosaina, indrindra fa ny fanefena bikan-tranonkala, fandrafetana rindrambaiko sy asa momba ny sary.
JA: Vinavinako ny hamorona rindrambaiko mifototra amin'ny rafi-panabeazana Karibeana sy koa hiasa momba ireo fitaovana fitsaboana.
Mbola mpianatra amin'ny anjerimanontolo ireto roalahy mpamokatra rindrambaiko ireto: Andel Husbands taona faharoa ao amin'ny Anjerimanontolon'i Florida Atsimo, ary Jonathan Agarrat dia zokiolona ao amin'ny Ivontoerana ho an'ny Teknolojia ao New York.
16 ora izayHaiti
1 herinandro izaySt. Vincent & the Grenadines